यिनै हुन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको एकमात्र छोरी सी मिङ्जे, जो यति शक्तिशाली छन् - Internet Sansar
Home / Featured / यिनै हुन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको एकमात्र छोरी सी मिङ्जे, जो यति शक्तिशाली छन्
internetsansar October 14, 2019	Featured, Stories Comments Off on यिनै हुन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको एकमात्र छोरी सी मिङ्जे, जो यति शक्तिशाली छन् 334 Views
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार उनलाई पढन्ते, धेरै शान्त र अध्ययनशील भनेर वर्णन गरिएको छ । उनी प्रेसको ध्यानबाट पनि सुरक्षित थिइन् र सधैं अंगरक्षकहरूसँग हुन्थिइन् । उनको कामका लागि २४ सै घण्टा सुरक्षागार्डले पहरा दिने गथ्र्यो । उनको बुबा अन्ततः मार्च २०१३ मा जन गणतन्त्र चीनको सातौँ औं राष्ट्रपति बने, त्यसपछि उनी आफ्नो परिवारसँग फेब्रुअरी २०१५ मा पहिलोपटक सार्वजनिक भइन् । -janatalive
यो पनि पढ्नुस्, हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले’ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका यी पंक्तिमा मात्रै सीमित रहेन अहिले सिस्नोको चर्चा । कुनै बेला गाउँघरमा दुई छाक खानाको जोहो गर्न नसक्नेहरूले समेत तुच्छ खानाको रूपमा लिने गरेको सिस्नो अहिले शहरका ठूला–ठूला डिपार्टमेण्ट स्टोर, तारे होटल, रेष्टुँराहरूमा महँङ्गो खानाको परिकारमध्येमा पर्न थालेको छ ।
राजधानीमा मुख्य कार्यालय रहेको सो कम्पनीले सिस्नो पाउडर देशभित्रमात्रै नभई अमेरिका, बेलायत, जापान, हङकङ, कोरियालगायतका मुलुकहरूमा पु-याइसकेको छ।
सिस्नो पछिल्लो समयमा सिस्नोको महत्वलाई बुझेर यसको कारोबारमा ओइरिने सङ्घ(संस्थाहरूको पनि लर्को लागेको छ । त्यसमा गाउँघरमा विभिन्न आमा समुह, सहकारीहरूले सिस्नोको प्रशोधनमा जुटेका छन् भने शहरमा दर्जनौं सङ्घरसंस्था र कम्पनीहरुले विभिन्न ब्राण्डबाट सिस्नोको कारोबार गरिरहेका छन् ।
सिस्नोमा के के पाइन्छ रु रायोको सागमा ३ सय ५० आई।यू।भिटामिन मात्रै पाइन्छ भने सिस्नोमा १२ सय आई. यू. भिटामिन ए, र भिटामिन सी अत्यधिक रुपमा पाइन्छ । तस्तै आइरन, फमिक एसिडलगायतका अन्य तत्वहरु पनि यसमा पाइन्छन् । भिटामिन पाइने अन्य तत्वहरु भन्दा सिस्नोमा सबभन्दा बढी भिटामिन हुन्छ ।
सिस्नोको प्रयोग गर्ने विधि १० ग्राम सिस्नोको धुलोलाई २ सय मिलिलिटर तातो पानीमा मिसाएर रातभरि भिजाएर छोडिदिने र बिहान खाली पेटमा खाने । यसरी नियमित रुपमा प्रयोग गर्दा छोटो समयमै यसबाट फाईदा लिन सकिन्छ ।
मानिस स्वस्थ रहनका लागि पनि भित्री पेटको सफाई अनिवार्य हुन्छ यसको लागि सिस्नो भन्दा उत्तम विकल्प अरु केही हुन सक्दैन । शरिरका भित्री अंगहरुको सफाइ गर्ने उपाय सजिलो छ । तर हामी कतिले थाहा पाएर पनि त्यो उपाय प्रयोग गरेका छैनौं । शरिरका बाहिरी अंगको सफाइका लागि पानी, श्याम्पु र साबुनले नुहाए जस्तै भित्री अंगको सफाइका लागि सिस्नु खानु पर्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्न् । हामीले हप्तामा एक पटक पानीले नुहाए जस्तै गरी नियमित रुपमा हप्तामा एकपटक सिस्नु खाने ग-यौं भने शरिरका भित्री अंग पनि सफा हुने नेपालका कृषि बैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्, फूलमा आत्मनिर्भर बन्दै नेपाल, यस वर्ष आयातीत फूलमा कमी काठमाडौं । विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्षको तिहारमा भारतबाट ल्याइने फूलको संख्यामा कमी आउने भएको छ । पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गर्नेको संख्या बढेको र यस वर्ष ठीक समयमा नै तिहार पर्व परेकाले आयात गरिने फूलको संख्यामा कमी आउने भएको हो । गत वर्ष भारतबाट रु ३० लाख बराबरको तीन लाख सयपत्री फूलको माला ल्याइएको थियो ।
यस वर्षको तिहारका लागि कति फूल ल्याउने भन्ने विषय यकिन नभए पनि खपत हुने फूलको बढीमा सात प्रतिशत मात्रै फूल ल्याइने फ्लोरीकल्चर एशोसिएसनले जनाएको छ । गत वर्ष १७ लाख माला खपत भएको थियो ।
सोमध्ये २० प्रतिशत भारतबाट ल्याइएको हो भने बाँकी स्वदेशी उत्पादन हो । तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूलमध्ये सयपत्री मात्रै भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा फूलको माला खपत हुने एशोसिएसनको अनुमान छ ।
व्यावसायिकरूपमा फूल खेती गर्नेको संख्या बढेकाले हरेक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशत स्वदेशी फूल उत्पादनमा वृद्धि हुने गरेको एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले जानकारी दिए । फूल उत्पादनको वृद्धिसँगै उपभोक्ताको माग पनि बढेको छ । यस वर्ष उपभोक्ताले एउटा सयपत्री मालाको मूल्य रु ६० देखि ७० सम्म बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
६० प्रतिशत माला उपत्यकामा खपत चाडबाड र अन्य समयमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत माला खपत भएको छ । तिहार र अन्य मौसममा गरी रु ११ करोड बराबरको फूल वार्षिकरूपमा विदेशबाट आयात गरिँदै आएको छ । मुख्य गरी कात्तिकदेखि फागुनसम्म विभिन्न चाडबाड र विवाहको मौसम पर्ने हुँदा फूल बढी प्रयोग हुने गरेको छ ।
Previous एक पटक अवश्य २ मिनेट निकालेर पढ्नुहोस ! आफूमा आएको दुर्भाग्यलाई परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने
Next माता पाथिभरा मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर भोलि मंगलवार को राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ